Amakhadi okuzalwa asimahla onokuzikhuphela: ezona webhusayithi zibalaseleyo | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | | ngokubanzi, Ukuphefumlelwa
Amakhadi okubulisa ahlala ekhona kubomi bethu bemihla ngemihla. Ukuvuyisana nomntu kuye kwaba yinto yentlalontle yemihla ngemihla, yintoni abaninzi abangaziyo yintoni esemva kwekhadi ngalinye lokuzalwa.
Yiyo loo nto, kule posi, sibhiyozela, kuba asizukukubonisa nje ezinye zeempawu zala makhadi esizaziyo sonke kwaye sazifumana ngexesha elithile, kodwa kwakhona, siza kukubonisa ezinye zezona zibalaseleyo. amakhadi wokuzalwa ukuba awunasizathu xa kufikwa ukuvuyisana nomntu omthandayo.
Ngokuqinisekileyo, siza kucebisa amanye awona maphepha angcono apho unokukhuphela khona.
Kwaye ayisiyiyo loo nto kuphela, ezinye zeenkqubo apho unokuziyila ngokuthanda kwakho.
1 Amakhadi omhla wokuzalwa: Yintoni?
1.1 Iindidi zamakhadi
1.1.1 Izixhobo zomculo
1.1.4 Ubungakanani obukhulu
1.2 Umlando omncinci
2 Ezona zokusebenza zilungileyo
2.2 Umenzi weKhadi leShishini
2.3 Ikhadi leCam
3 Ezinye izicelo zomdla
3.2 isipho sokuqala
Amakhadi omhla wokuzalwa: Yintoni?
amakhadi okuzalwa okanye imibuliso, zichazwa njengohlobo lwamakhadi apho umyalezo ungoyena mlinganiswa oyintloko, ngenxa yokuba izaliswe ngamazwi amnandi, ekubeni isigidimi sayo sibonisa ulonwabo. Adla ngokuba ngamakhadi entlalontle kuba edla ngokusetyenziswa ngamaxesha athile onyaka okanye kwimibhiyozo ethile, ngokomzekelo, sinokuwafumana amakhadi apho ubani avuyisana naye ngomhla wakhe wokuzalwa okanye kuba nje iyiKrismesi. Kukho abanye apho athi avuyisane nomsebenzi wakhe okanye ngokuphumelela kwakhe okuthile, enoba kungokwemidlalo okanye ngokobuqu.
Ngokuqhelekileyo, la makhadi adla ngokuhamba nemvulophu ebonisa igama laloo mntu ibhekiswa kuye.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zamakhadi okuzalwa, ngamnye kubo uneempawu ezenza ukuba zibe ngaphezulu okanye ngaphantsi kokudala, kodwa into ebalulekileyo kukuba bonke bagcina i-essence.
Amakhadi okubulisa omculo abonakaliswe, njengoko igama labo libonisa, ngokubandakanya umculo ngaphakathi. Zenziwe ngesithethi esincinci esihamba nebhetri kunye nesiphaluka esihamba kunye nomzuzu ochanekileyo wokuvulwa kwekhadi. Xa umntu evula ikhadi, lisebenza kwaye kuvakala ingoma emnandi kunye noopopayi ohamba nomyalezo owuthweleyo ngaphakathi.
Zibonakala kakhulu njengoko zisetyenziswa ngexesha leKrisimesi. Ukongeza, ngokuqhelekileyo abanalo ubungakanani obukhulu kakhulu, umzekelo, uninzi luyilwe kunye nobukhulu obungadluli kwi-DIN A5. Bayila kakhulu kwaye bajonge elona cala libuthathaka labantu ngomculo.
Amakhadi okubulisa e-3D Zibonakaliswa ngokubandakanya uthotho lweereliefs kunye neemilo ezigqamayo ukuze zinike inkangeleko engaphezulu kwezintathu. Bayila kakhulu kwaye amakhadi amnandi, apho umsebenzi oyintloko ulele kwi-animation.
Kanye njengokuba amakhadi abonakalayo eyilwe, sinokuwafumana kwi-intanethi. Ukongezelela, baya besanda abantu abathumela amakhadi okubulisa ahlukeneyo ngeposi okanye ngezicelo zemiyalezo. Zikhululekile kwaye zilula. Ukongeza, ziyakhawuleza kakhulu kuba ngokucofa ungazithumela ngoko nangoko kwaye ngaphandle kokubhala umyalezo.
Siqhele ukubona amakhadi okuzalwa asemgangathweni angekho makhulu kakhulu kwaye angekho mancinci kakhulu. Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, kukwakho namakhadi emibuliso emikhulu. La makhadi abonakaliswe ngokuba nemilinganiselo emikhulu kakhulu ngokobukhulu bawo.
Ngokugqibeleleyo, nganye kwezi egqibeleleyo inokulinganisa ngokufanayo ne-DIN A3, nangamanye amaxesha iDIN A1 iye yabonwa ikhona. Zingamakhadi agqibeleleyo ukuba ufuna ukumangalisa loo mntu ngendlela enkulu, kwaye azange athethe ngcono. Yiba nesibindi kwaye uqale ukuzisebenzisa.
Ukholwa okanye ungakholwa, amakhadi okubulisa okanye amakhadi anebali elinomdla kakhulu emva kwabo. Ukuze siyazi, kufuneka sihambe siye kutsho ngowe-1869. Inkonzo yeposi edumileyo yaseAustro-Hungarian yaba yeyokuqala ukuyila olu hlobo lwencwadana eprintiweyo.
ESpeyin, i-postcard yaqala ukufumana ukubaluleka ngonyaka we-1873, yayiyi-postcards engenazo imifanekiso ngokupheleleyo, yayinendawo yesitampu esidumileyo kunye nebhokisi elincinci lokufota. Ayemancinane kakhulu kunezi sizaziyo namhlanje yaye ukususela ngoko aye ayinxalenye ebalulekileyo neendlela zokudlulisela imiyalezo.
Ezona zokusebenza zilungileyo
Ukuba bekufuneka sikhethe phakathi kwezinye iindlela ezininzi, ngaphandle kwamathandabuzo, eyona nto iphambili iya kuba yiCanva. I-Canva luhlobo lomhleli we-intanethi apho unokuyila zonke iintlobo zezinto: iikhalenda, amakhadi, iipowusta, iibhilibhodi, njl.. Inepakethi yemifanekiso kunye nezinto zegraphic ezinokukunceda uyile elona khadi lokuposa okanye ikhadi lokuzalwa owakhe walibona.
Kwakhona, ngenxa yeetemplates zayo, unokwenza umsebenzi ngokukhawuleza kwaye kulula kunesiqhelo, kuba ezinye zazo ziza nefonti ekhethiweyo kunye nemibala.
Umenzi weKhadi leShishini
Ngesi sicelo, unokuyila okanye wenze ikhadi lakho lokuzalwa ngaphandle kokulihlawula. Isicelo sisimahla kwaye sinezixhobo ezahlukeneyo kunye nemisebenzi yokuyila. Kwakhona, ngenxa yeyantlukwano enikezelayo kwi-interface yayo, unokwenza amakhadi azo zonke iimilo kunye nobukhulu obunokwenzeka.
Ikwanayo neepakethe ezininzi ezintle zeefonti, imifanekiso, imibala kunye nezihluzo ezinomdla eziya kumangalisa umntu ofumana ikhadi lakho. Ngaphandle kwamathandabuzo sisixhobo esifanelekileyo kunye nesicelo ukwenza loo mntu akhetheke kakhulu kuwe kwaye umangaliswe luyilo lwakho.
NgeKhadi leCam awuyi kukwazi ukuyila amakhadi kodwa endaweni yoko, uya kukwazi ukuwaskena. Yeyona nkqubo igqibeleleyo ukuba into oyikhangelayo kukuskena uyilo lwakho kwaye ulusebenzisele ezinye iinjongo. Ine-beta okanye inguqulelo yasimahla apho ikuvumela ukuba ugcine inani lamakhadi angama-250, afanelekile kuba ikuvumela ukuba ugcine indawo enkulu yamakhadi owayileyo.
Kwakhona, njengesixhobo, ikwabonelela nokwenzeka kokwabelana ngeBluetooth okanye wabelane nge-imeyile, ezinye zezoyilo ozenzayo sele ziskeniwe. Kwisicelo esigqibeleleyo ukuba ufuna ukunika uchuku olwahlukileyo.
Umthombo: Uphononongo lobuNgcali
Ukuba into oyikhangelayo kukwenza ikhadi lobuchwephesha kunye nelokuyila, nge-InDesign unesisombululo. Sesona sixhobo sigqibeleleyo sokubeka kunye nokuyila izinto zendalo yokuhlela ngakumbi.Abayili abaninzi abasebenza ngesazisi basebenzisa le nkqubo ukwenza amakhadi oshishino enkampani ethile.
Ukongeza, ineefonti ezahlukeneyo, ukuze ungawi mfutshane okanye ufutshane kuyilo lwakho. Ikwabonelela ngezitayile ezahlukeneyo zeteksti kunye neenketho zemihlathi apho ungayila ngokugqibeleleyo kunye nokusasazwa okuchanekileyo kweetekisi. Ngokuqinisekileyo yiya kwi-Adobe kwaye uzame iindlela ezahlukeneyo ezinikezela ngazo.
Ukuba besikhe sathetha malunga noyilo ngaphambili, ngoku siza kuthetha ngokuyila imizobo yakho okanye imizobo yamakhadi akho. NgoMzobi, Awunakuyila kuphela yonke into eya kuba ngaphandle kwekhadi lakho, kodwa kunye nee-icon ezincinci okanye ii-vectors ozifunayo. Into epholileyo malunga nale app kukuba ineendlela ezahlukeneyo zokuthumela ngaphandle kunye nokushicilela, kwaye ikwasebenza kunye neeprofayili zemibala emibini ebalulekileyo, i-RGB kunye ne-CMYK.
Ngaphandle kwamathandabuzo sisicelo osifunayo ukuzisa amakhadi akho kunye noyilo ebomini. Ukongeza, unokuzama kwaye ulahlekelwe nguwe phakathi kwepakethi yeebrashi.
Ezinye izicelo zomdla
Twilley sisixhobo seenkwenkwezi kwabo bafuna impembelelo. Inemifanekiso engaphezu kwe-5000 yeentlobo ezahlukeneyo kunye neeklasi. Kufuneka nje wongeze igama kwi-injini yokukhangela kwaye iya kukubonisa imifanekiso engapheliyo yento oyikhangeleyo.
Kufanelekile ukuba ubambekile kwinkqubo yoyilo. Ke ngoko, inamawaka kunye namawaka emifanekiso enokukunceda ukuyila ikhadi lakho lokubulisa eligqibeleleyo. Ukongeza, ikwanezifundo ezincinci apho unokulandela kwaye uzivavanye kuyilo lwakho.
Ngesipho sokuqala awungekhe wenze izipho ezizezakho kuphela kodwa le webhusayithi ikwanethuba lokwenza amakhadi okuposa anemifanekiso yobuqu. Sisixhobo esigqibeleleyo sokumangalisa kunye nokonwaba kuba awukwazi ukuyila amakhadi eposi okanye amakhadi kuphela kodwa kunye nezinye izinto ezinomdla kulo naliphi na ixesha elikhethekileyo lonyaka: iKrisimesi, uSuku lweValentine, uMhla wokuzalwa, njl.
Kufuneka nje ukhangele phakathi kweethebhu zayo uhlobo lwemveliso oyikhangelayo kwaye yenza ukhangelo olukhawulezayo kwaye ikubonise ezinye zeenketho zayo ezifanayo okanye ezifanayo. Ngokuqinisekileyo igqibelele.
Ngamafutshane, ngolu luhlu lwezicelo kunye neewebhusayithi esikucebise ukuba awusenasizathu sokungaziyili eyakho. Amakhadi omhla wokuzalwa, njengoko kuchaziwe ngasentla, abeyinxalenye yethu kwaye aseyinxalenye yethu namhlanje.
Ngokuhambela phambili kwetekhnoloji, ngoku kuyenzeka ukuyila nge-intanethi, uninzi lwazo sele luze neetemplate ezenza uninzi lomsebenzi wokucinga. Ngoku ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukutsibela kwaye uzame ezinye zeenkqubo esizikhankanyileyo kwaye ube ngoyena myili wekhadi lokubulisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amakhadi omhla wokuzalwa wasimahla ukuze uwakhuphele
Izakhelo zePowerPoint zobuNgcali